Sida loo helo shaqooyin wax ku barayay kaaliyaha - shaqo wanaagsan bixinta loogu talogalay qaxootiga iyo soo galootiga | USAHello | USAHello
Sida loo helo shaqooyin wax ku barayay kaaliyaha – shaqo wanaagsan bixinta loogu talogalay qaxootiga iyo soo galootiga
Awoowe oo dhan ku saabsan shaqooyinka ku barayay oo injiilka waa maxay waajibaadka ku xigeenka. Baro tallaabooyinka aad u baahan tahay in ay qaataan si ay u noqdaan ku xigeenka bara.
In fasallada dalka oo dhan, macalimiinta wajihi fasalo badan oo aadan waqti ku filan oo la heli karo in la siiyo arday kasta dareenka shakhsi ahaaneed. Baridda shaqo ku xigeenka waa mid aad u muhiim ah in fasalka. Waxa ay taageertaa barista macalimiinta iyagoo gacan ka geysanaya ardayda hawlaha in ay qaataan waqti dheer.
Magacyada kale ee shaqada this waa: macalinka Associate, kaaliyaha macalinka, iyo pareducator.
Baridda kaaliyaha shaqo dugsi laga yaabaa in la beddelo dugsi. Associate inta badan caawiyaa ardayda mid mid ama koox yar. Yeelo isku xigta nidaamsan. Qayb ka mid ah shaqada waa in la siiyo waqti macalinka si uu diiradda u saari karin on baridda. Qaybta kale ee shaqada waa in la caawiyo ardayda in ay shaqadooda.
takaaliif ah ee kale waa:
Nuqulada shaqeeyaan iyo ururiyaan homework. La shaqaynta ardayda ardayda baahida Khash.okhz ka fasalka iyo qalabka fasalka Alhaflat.thouder Aldros.tnzim. Daawo ardayda si loo arko haddii ay u baahan yihiin si ay u Msaadh.almsaadh in qorshe sanadeedka waxbarashada xubnaha qoyska Talib.mkablh in ay ka hadlaan ardayda Atalib.alahrav inta lagu guda jiro fasaxa iyo qado
Baridda Caawiyayaal ee dugsiyada iyo hawlaha guud sare ee hoose iyo dhexe. Sidoo kale waxay ka shaqeeyaan dugsiyada gaarka ah. Waxay in goobaha waxbarashada gaarka ah, sida kuwa dugsiyada baahida gaarka ah, xarumaha xanaanada iyo daryeelka ilmaha, ururada diinta shaqeeyaan laga yaabaa in.
Shaqooyinka Mushaharka Baridda Caawiyayaal
aides qaadaan barayay celcelis ahaan u dhexeeya $ 19,000 ilaa $ 23,640 sannadkii. Pay kor u kacda (Ilaa $ 30,000) Meelaha qarashka maciishadda baxdo.
Baridda Kaaliyaha shaqada waa qumman yahay haddii aad ku raaxaysato la-shaqeynta caruurta iyo haddii aad rabto si ay u noqdaan macalin mustaqbalka. Sidoo kale waa xirfad wanaagsan haddii aad rabto in aad la caruurta leh baahida khaaska shaqeeyaan (Maskax ahaan carruurta naafada ah ama jir ahaan). xirfadaha luqadda yihiin qiimo leh ee wax ku barayay kaaliyaha shaqooyin noqon doonaa haddii aad arday cusub oo ka shaqeeya.
Daawo video ah oo ku saabsan hawlaha kaabayaasha waxbarasho ee waxbarashada gaarka ah
Tayada aad hantidaan
Alsber.tabaah Alodah.allotf iyo Altvahm.akaddrh in anshaxa dayactirka. Isgaarsiinta Algid.mrn, gorgortan baahida ardayga Tkev.tostagib
Skills in loo baahan yahay
xirfadaha Altdras.mharrat Alhacob.almharrat Altnzimih.mharrat wanaagsan in xeerarka xisaabta iyo luqadda. Gargaarka Degdegga ah.
Hel xaq u yeelashada
Waxaad u baahan doontaa si aad u hesho shahaado xiriir (Laba sano ka Certification) In waxbarashada ama ugu yaraan laba sano jaamicad si aad u hesho kaaliye macallin shaqo inta badan dugsiyada dawladda.
dugsiyada gaarka ah ama madax banaan Qaar ka mid ah ma u baahan tahay heerka uu raacsan. Laakiin waxay u badan tahay in kaaliyayaasha waxbarashada shaqada qaar ka mid ah tababarka waxbarashada. Sidoo kale, haddii aad rabto si ay u noqdaan macalin mustaqbalka, waxaad isticmaali kartaa waxbarashadaada u guurto dhinaca gool this.
Kulliyadaha bixiyaan laba sano degrees diiwaan gelinta waxbarashada semi-xirfadeed, ama si ay u caawiyaan macalinka ama kaalmada waxbarashada. Waxaad ku baran kartaa si aad u hesho mid ka mid ah degrees ee Community College. Haddii aad ka shaqayso inta lagu jiro maalinta, waxaad ku baran kartaa online qaar ka mid ah fasalada, kuwaas oo.
Search for Kulliyadaha bulshada dhow aad – link si ay u https://www.careeronestop.org/LocalHelp/CommunityServices/find-community-colleges.aspx؟newsearch=true
Baro Shahaadada Associate Online – link si ay u https://www.teachercertificationdegrees.com/degrees/associates-degree/
Si aad u hesho shahaado sidii kaaliye macallin ah, waxaad u baahan doontaa si aad u hesho shahaado kulliyad muddo laba sano ah. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad tababar ku dhameysan. Taas macnaheedu waa in aad jimicsi doonaa xirfadaha ee simistarka dhabta ah soociddiisa. Gobollo badan waxa ay u baahan tahay shahaadada la yiraahdo qiimaynta Kalkaaliye Tacliimeed.
Baro shuruudaha Kalkaaliye Tacliimeed ee gobolka – link si ay u https://www.ets.org/parapro/state_requirements
Haddii aadan weli dugsiga ama jaamacadda, soo gudbin doonaa codsi tababar goob shaqo sida macalin ku xigeen. Tani waxay idinka badbaadin doonaa waqti ka dib. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay lix bilood ama sanad ah oo waayo aragnimo ah la tababarayo inuu xaq u shaqooyin wax ku barayay kaaliyaha.
Waxaad u baahan tahay shahaado dugsi sare si ay u bilaabaan la?Qaado GED® free koorso online. site Schoolspring.com Waa site a for hawlaha waxbarashada. Read ku saabsan shaqooyinka kale ee Waxbarashada. Read hawlaha ku saabsan la mid ah